Ohabolana 26 - Baiboly Masina [Malagasy Bible 1865]
26:1 26:2 26:3 26:4 26:5 26:6 26:7 26:8 26:9 26:10 26:11 26:12 26:13 26:14 26:15 26:16 26:17 26:18 26:19 26:20 26:21 26:22 26:23 26:24 26:25 26:26 26:27 26:28
&nbspToy ny oram-panala amin'ny lohataona, Ary toy ny ranonorana amin'ny taom-pijinjana, Dia toy izany ny voninahitra tsy tandrifiny ho an'ny adala.
&nbspToy ny vorona mivezivezy sy ny sidintsidina manidina, Dia toy izany ny fanozonam-poana: tsy mba hihatra izany.
&nbspNy karavasy ho amin'ny soavaly ny lamboridy ho amin'ny boriky, Ary ny tsorakazo kosa ho amin'ny lamosin'ny adala.
&nbspAza mamaly ny adala araka ny hadalany, Fandrao mba adala tahaka azy koa ianao.
&nbspValio ny adala araka ny hadalany, Fandrao dia manao azy ho hendry izy
&nbspManapaka ny tongony sady misotro loza Izay mampitondra teny ny adala.
&nbspMikepikepika ny tongotry ny malemy tongotra, Dia toy izany ny ohabolana eo am-bavan'ny adala.
&nbspToy ny manisy vato eo amin'ny antsamotady, Dia toy izany ny manome voninahitra ny adala.
&nbspToy ny tsilo eny an-tànan'ny olona mamo, Dia toy izany ny ohabolana eo am-bavan'ny adala.
&nbspNy mpiasa mahay dia mahavita ny zavatra isan-karazany; Fa izay manakarama ny adala dia toy ny manakarama izay sendra mandalo.[Na: Toy ny mpandefa zana-tsipìka mahavoa ny olona rehetra, Dia toy izany ny manakarama ny adala sy manakarama izay sendra mandalo]
&nbspToy ny amboa miverina amin'ny loany, Dia toy izany ny adala miverina amin'ny hadalany.
&nbspHitanao va ny olona manao azy ho hendry? Ny adala misy hantenaina kokoa noho izy.
&nbspHoy ny malaina: Misy liona any an-dalana, Misy liona atsy an-dalambe.
&nbspToy ny varavarana mihodina amin'ny saviliny, Dia toy izany ny kamo eo amin'ny fandriany,
&nbspNy malaina mangarona ny eo an-doviany, Nefa ny hampakatra azy ho amin'ny vavany dia mahasasatra azy.
&nbspNy kamo manao ny tenany ho hendry mihoatra noho ny olona fito izay mahavaly tsara.
&nbspIzay mandalo ka mitsaraingona amin'ny ady tsy azy Dia mandroritra amboa amin'ny sofiny.
&nbspToy ny adala izay manely afo sy zana-tsipìka ary fahafatesana,
&nbspDia toy izany ny olona mamitaka ny namany ka manao hoe: Tsy vosobosotra ihany va no ataoko?
&nbspRaha tsy misy kitay intsony, dia maty ny afo; Ary raha tsy misy mpifosafosa intsony, dia mitsahatra ny fifandirana.
&nbspToy ny arina atao amin'ny vainafo sy ny kitay hazo atao amin'ny afo, Dia toy izany, ny olona tia ady mandrehitra fifandirana.
&nbspNy tenin'ny mpifosafosa dia toy ny hanim-py ka mikorotsaka ao anaty kibo indrindra.
&nbspTavim-bilany misy ankosotra taim-bolafotsy ny molotra mihatsaravelatsihy sy ny fo ratsy.[Heb. mirehitra]
&nbspNy mpandrafy dia mody ho hafa amin'ny molony Sady manafim-pitaka ao am-pony;
&nbspKoa na dia miteny soa aza izy, aza mino azy; Fa fahavetavetana fito no ao am-pony.
&nbspNy lolompo dia miafina ao amin'ny fitaka; Nefa ny haratsiany dia haharihary eo am-pahibemaso.
&nbspIzay mihady lavaka no ho latsaka ao, Ary izay manakodiadia vato no hikodiavany kosa.Halan'ny lela mandainga izay efa nampahoriny, Ary ny vava mandrobo dia mampidi-doza.
&nbspHalan'ny lela mandainga izay efa nampahoriny, Ary ny vava mandrobo dia mampidi-doza.